Turkigu waa Dalka 3aad ee bixiyay taageerada caafimaad ee ugu badan caalamka - Tilmaan Media
Wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Turkiga Yavuz Selim, isaga oo kahadlaya sida gargaarku qaybta oga yahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in Turkigu yahay dalka saddexaad ee bixiya taageerada iyo gargaarka caafimaad ee ugu badan caalamka.
İsago internetka oga qaybgalaya Shirka 4aad ee Brussels ee diiradda lagu saarayay sida loo waajahay xanuunka Covid-19 ayaa wuxuu sheegay in dalkiisu caawimaad gaarsiiyay 131 dal intii xanuunku jiray.
Wuxuu intaas ku daray in Turkiga waajaheen labo arrimood oo kala ah; taakulaynta qaxootiga kunool Turkiga gudihiisa iyo kaqayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dalalka kale ee xanuunku saameeyay.
İsagoo kahadlaya guulaha Turkigu kagaaray ladagaalanka Covid-19, wuxuu yiri “ Waxaan dadka oo dhan oo ay kujiraan qaxootigu siinaa adeeg caafimaad oo bilaash ah, arrintaan ayaa noo suurtagalisay in aan xakkamayno faafidda xanuunka, laakiin guul kama gaari karno dagaalka aan xanuunka kula jirno haddii dhamaan dalalka caalamku isu bahaysan xanuunkan”.
“ Qaxootiga iyo dadka magangalyo doonka ah waa in aan loola dhaqmin si kabaxsan bini,aadamnimada sidoo kale waa in aan si khassab ah dib loogu celin” ayuu hadalkiisa ku daray.
Tan iyo markii uu kasoo if baxay dalka Shiinaha bishii Disember ee sanadkii hore, xanuunka Covid-19 wuxuu caalamka ku dhacay dad gaaraya 9 malyan iyadoo ay udhinteen 469,000, halka 4.46 malyan oo ruuxna ka boqgsadeen, sida ay sheegtay Jaamacadda Jhons Hopkins.
İyada oo lagu guda jiro dagaalka lagula jiro Covid-19, Turkigu wuxuu safka hore kaga jiraa hawlaha gargaarka. Ku dhawaaad saddex meelood labo dalalka caalamka ayaa Turkiga usoo gudbiyay codsiya taageero caafimaad. Codsiyadaas kalabar waa laga jawwaabay.
Gargaarka caafimaad ee Turkigu baxshay ayaa isugu jira, maskiyada afka iyo sanka lagu xidho, dharka la, isaga ilaaliyo xanuunka, galoofiska gacmaha, iyo agabka jeermiska-dila. Alaabahaan ayaa waxaa lagu sameeyaa warshado millatarigu leeyahay.
Turkiga waxaa ku nool in kabadan 3.5 malyan oo qaxooti suuriyaan ah kuwaasoo kasoo qaxay dagaalada kasocda dalkaas. Wuxuuna Turkigu lambar kow kayahay dalalka marti-galiya qaxootiga iyo magangalyo doonka.